Askar Ka Tirsan Dowlada Federaalka Oo Lagu Weeraray Gobalka Baay, – Calamada.com
Askar Ka Tirsan Dowlada Federaalka Oo Lagu Weeraray Gobalka Baay,
calamada February 28, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya gobalka Baay ee Konfur Galbeed dalka Soomaaliya waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal ah loo dhigay kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka oo ku socdaalayay gobalkaasi.
Kolanyada kamiinka loo dhigay ayaa ka baxay degmad Baydhabo ee xarunta gobalka Baay waxeyna kusii jeedeen dhanka degmada Bardaale ee isla gobalka Baay’kamiinka waxa uu sababay khasaara nafeet oo soo gaartay maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in weerarkaasi dhabba galka ah lagu dhaawacay saddex askari oo maleeshiyaatka dowlada federaalka ah kuwaasi oo dhaawacyadooda maleeshiyaatka dowlada la galeen gudaha degmada Bardaale.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in Labo gaari oo Cabdi Bile ah oo ay wateen maleeshiyaatka Murtadiinta ee kamiinka loo dhigay ay isku dhaceen intii ay ka baxsanayeen goobta weerarka dhabba galka ah uu ka dhacay’waxey dadka deegaanka intaasi ku dareen in shilkaasi gaari sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay askarta dowlada federaalka.
Kamiinkan ayaa imaanaya xilli barqo nimadii maanta howgal gaar ah oo ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ka fuliyeen gudaha magaalada Muqdisho lagu dilay Cabdi Raxmaan Af-leershe oo ka mid ahaa maamulka dowlada hoose ee gobalka Banaadir’sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay labo ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 01-06-1438 Hijri.
Next: Mowliid Muxamed Oo Lagu Dilay Degmada Dharkenley.